Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny PCV13 sy PPSV23 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny PCV13 sy PPSV23 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / bakteriolojia / Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny PCV13 sy PPSV23
24 aogositra 2021 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny PCV13 sy PPSV23 dia ny PCV13 (vaksiny conjugate pneumococcal 13 valent) dia vaksinina miady amin'ny pnemonia izay misy antigène 13 avy amin'ny serotypes mahazatra, raha ny vaksinin'ny PPSV23 (23-valent polocaccal polysaccharide) dia vaksinina hiadiana amin'ny pnemonia izay misy 23 antigén avy amin'ny serotypes mahazatra.
Ny pnemonia dia aretin'ny taovam-pisefoana izay miteraka aretina sy fahafatesan'olona lehibe eto an-tany. Ny bakteria Streptococcus pneumoniae no pathogen be mpahalala indrindra izay miteraka pnemonia azon'ny fiaraha-monina. Any Etazonia, i S. pneumoniae dia tompon'andraikitra amin'ny trangana pnemonia 500,000 ary trangana bakteria 50 000 isan-taona. Ho fanampin'ny olana ara-pahasalamam-bahoaka, ny pnemonia koa dia mitaky vola be amin'ny rafi-pitsaboana. Misy vaksiny roa mikendry an'i S. pneumoniae amin'izao fotoana izao. Ireto vaksiny roa ireto dia PCV13 sy PPSV23.
2. Inona ilay PCV13
3. Inona no atao hoe PPSV23
4. Fitoviana - PCV13 sy PPSV23
5. PCV13 vs PPSV23 amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - PCV13 vs PPSV23
Inona ny PCV13?
PCV13 (vaksiny conjugate pneumococcal 13 valent) dia vaksinina miady amin'ny pnemonia ateraky ny Streptococcus pneumonia. Ity vaksinina ity dia misy antigène 13 avy amin'ny serotypes mahazatra. Ny anarana iray hafa ho an'ny PCV13 dia Prevnar 13. Izy io dia vaksinina mampihetsi-po izay ampiasaina matetika hiarovana ny zazakely sy ny ankizy ary ny olon-dehibe amin'ny pnemonia ateraky ny bakteria Streptococcus pneumoniae . Izy io dia misy polysaccharides capsular voadio an'ny serotypes pneumococcal mifangaro amin'ny proteinina mpitatitra . Raha ny mahazatra, proteinina mitondra diphtheria io proteinina mitondra io. Ity conjugation ity dia manatsara ny valin'ny antibody.
Sary 01: PCV13
Ny fikambanana ara-pahasalamana manerantany dia manome soso-kevitra ity vaksinina mampihetsi-po ity amin'ny fanaovana tsimatimanota matetika amin'ny ankizy. Ankoatr'izay, ity vaksinin'ny PCV13 ity dia vitan'ny orinasa Pfizer (Wyeth taloha). Ny serotypes telo an'ny pneumococcus amin'ity vaksinina ity dia 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F ary 23F. PCV 13 dia nankatoavin'ny Vondrona Eropeana tamin'ny Desambra 2009. Tamin'ny volana Febroary 2010, nankatoavina tany Etazonia izy io hanoloana ny vaksinin'ny conjugate 7-valent pneumococcal.
Ny voka-dratsy aterak'ity vaksiny ity dia ny mena, ny fivontosana, ny fanaintainana, ny fahalemem-panahy izay nisy ny fitifirana, ny tazo, ny fahaverezan-komana, ny fikorontananana, ny havizanana, ny aretin'andoha, ny hatsiaka, sns. vaksinin'ity vaksinina mampihetsi-po ity.
Inona ny PPSV23?
PPSV23 (vaksinin'ny polysaccharide pneumococcal 23 valent) dia vaksinina hiadiana amin'ny pnemonia ateraky ny pnemonia Streptococcus. Ity vaksinin'ny polysaccharide ity dia misy antigène 23 avy amin'ny serotypes mahazatra. PPSV23 dia afaka misoroka aretina pneumococcal mitovy amin'ny vaksinin'ny PCV13. Ankoatry ny pnemonia, ny PPSV23 dia afaka misoroka koa ny aretin-tsofina, ny aretina sinus, ny meningite ary ny bakteria.
Sary 02: PPSV23
PPSV23 dia atolotra ho an'ny olon-dehibe rehetra 65 taona no ho miakatra ary na iza na iza 2 taona no ho miakatra izay manana aretina. Amin'ny ankapobeny, PPSV23 dia miaro amin'ny karazana bakteria 23 izay miteraka aretina pneumococcal. PPSV23 dia tena zava-dehibe ho an'ireo izay voan'ny VIH / SIDA. Ny serotypes misy ao amin'ny vaksininy dia 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F , ary 33F. Ity vaksininina ity dia afaka manome voka-dratsy toy ny mena, mangirifiry, na fanaintainana izay nitifirana, havizanana, fahalemena, fivontosana na fanamafisana ny toerana fanindronana, tazo, fanaintainan'ny hozatra ary fanehoan-kevitra mahery vaika, sns.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny PCV13 sy PPSV23?
PCV13 sy PPSV23 dia vaksinina roa mikendry ny bakteria pnemonia .
Ireo vaksinina roa ireo dia misy polysaccharides capsular an'ny serotypes pneumococcal.
Ireo vaksinina ireo dia mitsabo aretin'ny pnocococcal.
Ny vaksinina roa dia manakana ny aretin-tsofina, ny sinus, ny meningite, ny bakteria, ankoatry ny pnemonia.
Serotypes roa ambin'ny folo ambin'ny folo ampidirina ao amin'ny PCV13 dia mahazatra an'ny PPSV23.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny PCV13 sy PPSV23?
PCV13 dia vaksinina miady amin'ny pnemonia izay misy antigène 13 avy amin'ny serotypes mahazatra, raha PPSV23 kosa dia vaksinina miady amin'ny pnemonia izay misy antigène 23 avy amin'ny serotypes mahazatra. Ka io no mahasamihafa ny PCV13 sy ny PPSV23. Ankoatr'izay, ny PCV13 dia mandrakotra serotypes pneumococcal kely kokoa saingy mety hiteraka tsimatimanota maharitra sy maharitra, raha ny PPSV23 kosa dia manarona serotypes pneumococcal marobe nefa mety tsy hiteraka hery fiarovana maharitra maharitra.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ireo fahasamihafana misy eo amin'ny PCV13 sy PPSV23 amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - PCV13 vs PPSV23
Streptococcus pneumoniae no pathogen be mpahalala indrindra izay miteraka pnemonia azon'ny fiaraha-monina. Misy vaksiny roa mikendry an'i S. pneumoniae amin'izao fotoana izao. Izy ireo dia PCV13 sy PPSV23. PCV13 dia miaro amin'ny karazana bakteria Streptococcus pneumoniae 13 izay miteraka aretina pneumococcal, raha i PPSV23 kosa miaro amin'ireo karazana bakteria Streptococcus pneumoniae 23 izay miteraka aretina pneumococcal. Noho izany, ity no fahasamihafana lehibe eo amin'ny PCV13 sy PPSV23.
1. “ Fanambarana fampahalalana momba ny vaksinina Pneumococcal Conjugate .” Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, foibe fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 6 aog 2021.
2. " Fanambarana fampahalalana momba ny vaksinin'ny polysacaride Pneumococcal ." Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina, foibe fanaraha-maso sy fisorohana aretina, 30 oktobra 2019.
1. " Vaksinim-pifandraisana mialoha Prevenar, Pneumococcal (PCV13) " Nosoratan'i Whispyhistory - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) avy amin'ny Wikimedia Commons
2. " Pneumovax 23 " Nosoratan'i Waddie96 - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Hydrophobic sy Hydrophilic Amino Acids Fahasamihafana eo amin'i E. Coli sy Klebsiella Fahasamihafana eo amin'ny Mycoplasma sy Ureaplasma Fahasamihafana eo amin'i Pseudomonas sy Staphylococcus Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Mycobacterium Tuberculosis sy Mycobacterium Bovis
Fahasamihafana eo amin'ny fifandraisana sy ny fifandraisana
Fahasamihafana eo amin'ny Glutamine sy Glutamate
Fahasamihafana eo amin'ny Antarctic sy Antarctica
Fahasamihafana eo amin'ny fihenan'ny kaonty sy ny fihenan'ny hetra
Fahasamihafana eo amin'ny Hydroponics sy Aquaponics